Madaxweynaha Puntland oo Garoowe Ku Qaabilay Safiirka China Ee Soomaliya (Masawiro)
November 16, 2017 - Written by Editor
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay tariikhdu tahay 16 Nov 2017 qasriga Madaxtooyada Garoowe kusoo dhoweeyey wefti uu hogaaminayo danjiraha dalka Chine u fadhiga Soomaaliya Mr. Qin Jian.
Kahor kulanka Madaxweynaha iyo safiirka ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Kanooko ee magaalada Garoowe ku soo dhoweeyey masuuliyiin ka tirsan goleyaasha dawladda Puntland iyo saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Puntland.
Madaxweynaha Puntland iyo safiirka dalka chine ee Soomaaliya ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimo ay kamid ahaayeen mashaariicda horumarineed ee dalka Chine ka fuliyo Puntland gaar aahan mashariicda waaweyn ee hadda dalka ka socda , adkaynta xidhiidhka Puntland iyo dalka Chine iyo iskaa shiga labada dhinac ee arrima ganacsiga, waxbarashada iyo caafimaadka.
Madaxweynaha dawladda Puntland ayaa ugu horayn safiirka iyo weftigiisaba ku soo dhoweeyey Puntland, waxaana uu Madaxweynuhu xaqiijiyey in xidhiidhka ka dhexeya dalka Chine iyo Puntland uu yahay mid wanaagsan oo soo jireena, taasna ay tusaale u tahay mashaariicda horumarineed ee dalka Chine ka fuliyey gudaha Puntland iyo kuwa hadda kasocdaba, isla markaana waxa uu Madaxweynuhu tilmaamay in dawladda Puntland diyaar u tahay adkaynta iyo xoojinta xidhiihka ee ka dhexeeya labada dhinac.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa xusay in arrimaha iskashiga Puntland iyo dalka China ee ganacsiga, waxbarashada iyo caafimaadka ay yihiin kuwo buldhig u ah wada shaqaynta dhow ee ka dhexysa Puntland iyo dalka Chine, isla mar’ahaantaana ay dawladda Puntland diyaar u tahay adkaynta, wanaajinta iyo dardargelinta arrimahasi iskaashi.
Dhinaca kale danjire Mr. Qin Jian ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin dhankooda adkaynta xidhiidhka wanaagsan ah ee ka dhexeeya Puntland iyo dalka Chine iyo sidoo kale dardar gelinta iskaasiha labada dhinac ee arrimaha ganacsiga, waxbarashada iyo caafimaadka , waxaana uu sidoo kale xusay Safiirku inuu ku faraxsan yahay imaanshaha Garoowe iyo guud ahaan gudaha dawladda Puntland.
Ugu danbayn, Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa marlabaad kusoo dhoweeyey Safiirka iyo weftigiisaba dawladda Puntland, isagoona Madaxweynuhu hoosta ka xariiqay in Puntland iyo shacabkeeduba diyaar u yihiin waxkasta oo wanaajinaya horumarinta ganacsiga iyo kabayaasha dhaqaalaha ee ka dhexeeya dawladdaha Puntladn iyo China.